စမုရနမြို့အသင်းတော်သို့ အမှာစာပါးခြင်း | Rev.U Min Lwin
Posted by ဦးမင်းလွင် on 07/04/2013
Posted in: တရားဟောချက်.	Tagged: ဗျာဒိတ်, အသင်းတော်.	Leaveacomment
“စမုရနမြို့၌ရှိသော အသင်းတော်၏ တမန်ကို ဤသို့ရေး၍ မှာလိုက်လော့။ အဦးဆုံး သောသူ၊ နောက်ဆုံးသောသူ တည်းဟူသော အရင်သေ၍ အသက်ရှင်လျက်ရှိသော သူ၏အမိန့်တော်ကား သင်အကျင့်ကျင့်ခြင်း၊ ဒုက္ခခံခြင်းကို ငါသိ၏။ သို့သော် လည်း သင်သည် ကြွယ်ဝ ပြည့်စုံခြင်းရှိ၏။ ယုဒလူ ဖြစ်ယောင်ဆောင်၍ ယုဒလူမှန် မဟုတ်။ စာတန်၏ အပေါင်းအသင်း ဖြစ်သော သူတို့၏ ကဲ့ရဲ့ ခြင်းကိုလည်း ငါသိ၏။ သင်သည်ခံရမည့်အရာ တစ်စုံတစ်ခုကိုမျှ မကြောက်နှင့်။ သင်တို့သည် စုံစမ်းခြင်းကို ခံရမည်အကြောင်း မာန်နတ်သည် သင်တို့တွင် အချို့ကို ထောင်ထဲ၌ လှောင်ထား၍ သင်တို့သည် ဆယ်ရက်ပတ်လုံး ဆင်းရဲဒုက္ခကို ခံရကြလိမ့်မည်။ သေသည်တိုင်အောင် သစ္စာ​စောင့် ​လော့။ သို့ဖြစ်လျှင် အသက် သရဖူကို ငါပေးမည်။” (ဗျာဒိတ် ၂း၈-၁၀)
← ထမြောက်ခြင်းကို ယုံကြည်တဲ့ အာဗြဟံ
ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော်ထဲတွင် အသက်ရှင်ခြင်း →